Ny fanasan-tongotra dia rehefa mivalona amin'ny vatohara manontolo na faritra mihitsoka tanteraka. Sary @ Great Barrier Reef Marine Park Authority
Ny fantsona Coral dia valim-bazana mahazatra amin'ny vatohara eo amin'ny fihenjanana, ary tsy voatery hiteraka ahiahy ny zanatany kôlônika na ny fako kely amin'ny haran-dranony. Na dia izany aza dia mety hisy fiantraikany eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana manontolo ny hetsika marevaka marefo, na dia an-jatony (ary indraindray an'arivony!) Kilometatra! Ary antony iray lehibe ahafahana miahy ireo mpitantana ny haran-dranomasina sy ireo mpandray anjara.
Ny hetsika fanangonam-bidy no voalohany indrindra Niteraka amin'ny mari-pahaizan'ny ranomasina mihoatra ny farafahakeliny mandritra ny fahavaratra mandritra ny fotoana maharitra (herinandro). Ny fihenan'ny hafanam-po sy ny fahavitrihan'ny hetsika marefo dia mihamitombo tato anatin'ny folo taona farany, ka miteraka fahasimbana eny amin'ny habakabaka maneran-tany. Ireo zava-mitranga ireo dia tokony hitranga matetika raha mbola mitombo hatrany ny mari-pana eny ambony ranomasina manoloana ny fiovan'ny toetr'andro. ref
Ny fahasimbana marevaka dia mety miovaova amin'ny rafitra fisamboaravoaran-java-bary, na dia ao anatin'ny hetsika marevaka betsaka aza. Ny karazana tranga rehetra dia hisy fiantraikany amin'ny fotoana sy ny faharetan'ny fahandro, indrindra amin'ny habetsahan'ny vatohara na faritra tsirairay. Raha ny tandroka avoakan'ny rano sy ny tara-pahazavana manjelatra no voalohany dia ny fanamafisana ny mason-koditra, ny tony sy ny fahamendrehana amin'ny fe-potoana kely dia afaka mampitombo ny adin-tsaina ary mampitombo ny fahandroana. Ny tsy fisian'ny rivotra sy ny tondra-drano dia mety miteraka fihenam-bidy ny rano, marika madio kokoa, ary lalindalina kokoa ny fiparitahan'ny masoandro (izany hoe ny habetsaky ny hazavana miditra amin'ny tsipika rano).
Ny fandinihana maneran-tany momba ny fivalanana ho an'ny haran-dranomasina dia manomboka amin'ny taona 50 farany (hatramin'ny volana 2015). Kitiho raha hanitarana. Loharano: Reefbase
Ny valintenin'ny vondrom-piarahamonina haran-dranomasina hiantehatra dia miankina amin'ny toe-piainana (fitohizan'ny efa teo aloha) ny haran-dranomasina ary ny habetsahana sy ny fananganana ny vatohara. Ireo vatohara amin'ny toeram-piarovana dia mety tsy mihamahazo vatana kokoa, na manadio ny taolany noho ny vatohara biby mampinono. Ireo toe-javatra izay mampihena ny toe-javatra mampihetsi-po, toy ny rahona, ny rivotra mahery, na ny oram-baratra tropikaly dia mety ho ampy hiarovana ireo vatohara amin'ny fongana.
Fandinihana ny zava-nitranga tamin'ny mason'ny Coral Bleaching
Ny fanasam-be dia mitranga rehefa mitombo ny mari-pahaizan'ny ranomasina ny 1-2 ° C eo ambony maxima mandritra ny vanim-potoam-pahavaratra mandritra ny fotoana maharitra ary arahin'ny tara-masoandro mahery. Sary © Great Barrier Reef Marine Park Authority
Raha mianjera eny amin'ny rivotra mahavariana ny haran-dranomasina dia miankina amin'ny karazan-javatra isan-karazany ara-batana sy biolojika. Na izany aza, ny rohy matanjaka ho an'ny mari-pana dia manome fototra azo itokisana amin'ny faminaniany ny mety hitranga sy ny fandaharam-potoanan'ireo hetsika marevaka.
Ny herinandro fanasitranana (DHWs) dia metric ampiasain'ny programa Coral Reef Watch NOAA mba hanampiana ireo mpitantana ny haran-dranomasina manerantany manara-maso ny loza mitatao. Noho ny fisian'ny korontana mitoka-monina dia voafaritra amin'ny habetsaky ny tsy fetezan'ny mari-pana sy ny faharetany (ohatrinona ny mari-pana eo anelanelan'ny dian-trano mivoaka ary ny hafiriana dia nijanona teo ambonin'io dingana io) fanafanana diplaoma herinandro (DHWs) dia ampiasaina hanehoana ny fihenan'ny fiakaran'ny hafanana ho an'ny vatohara. Ny iray amin'ireo DHW dia mitovy amin'ny herinandro amin'ny mari-pahaizan'ny ranomasina ambony iray isaky ny degre Celsius lehibe noho ny tara-pahazavan'ny lohataona. Ny roa amin'ireo DHW dia mitovy amin'ny roa herinandro amin'ny ambaratonga iray ambony ambonin'ny tara-paharetana amin'ny ho avy or herinandro iray isaky ny dingana roa ambony ambonin'ny tara-pahazavana mandritra ny fe-potoam-pahavaratra. Ao amin'ny 4 DHWs, nanjary nanaitra ny fahasalamana ny toe-pahasalamana, ary mety hitranga izany. Mety hiteraka fahasorenana sy mety hitranga mety hitranga eto amin'ny 8 DHWs na bebe kokoa.
Tsindrio eto raha hijery eto fanaraha-maso ary fitantanana fanimbana.
Ao anaty rano mafana: Coral Bleaching Lahatsary fizarana 1
Ao anaty rano mafana: Coral Bleaching Lahatsary fizarana 2